SIDEE LOO KARIYAA DUFANKA GURIGA HADHUUDHKA: SIDA LOO KARSADO CUNTO MACMACAANKA MICROWAVE LAGA BILAABO KOONE CUSUB AMA ISKU SHIISHAAN DIGSI CAADI AH. - KHUDRADDA
Noocyada wax lagu karsado oo ay la socdaan daaweyntooda: sida loo sameeyo hilibka doofaarka ee guriga dhexdiisa?
Inta badan delicacies casriga ah, gaar ahaan carruurta, waxay yihiin xaalad ahaan faa'iido leh, iyo marar badan - si khaas ah waxyeello leh sababtoo ah wax lagu daro, ka badan sonkorta iyo subagga. Waxaad bedeli kartaa xaaladda adoo sameynaaya buunshaha guriga.
Maqaalkani, waxaan eegi doonaa sida loo sameeyo dufka cusub ee hadhuudhka ah ee guriga oo ku dhex cajiin digsi leh gacmahaaga, ama ku kari mashiinka microwave guriga: waa qaali ah, ma adadag iyo dhakhso, iyo ugu muhiimsan - dhadhan fiican iyo caafimaad leh.
Waa maxay caanaha, ama daangada, maanta qof kasta wuu ogyahay. Magaca ayaa ka yimid ereyada ingiriiska ee hadhuudhka - "hadhuudh", pop - "kufadhiyo boog." Sharafka helitaanka saxankaan ayaa iska leh Hindida, kuwaas oo ahaa kuwii ugu horeeyay ee ogaadaa in hadhuudhka galleyda, garaacista dabka, uu qarxo, u jeesto ubaxyo cad oo casri ah.
MUHIIM! Corn ayaa qarxa sababtoo ah joogitaanka dhibic istaarijin oo biyo ah. Marka la kululeeyo, biyuhu waa isku buuqaan, iyo kululeeyaha kulul jabaa qolofka, qasbada miraha si kor loogu qaado mugga.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo popcorn ah:
Iyada oo subagga.
Iyada oo jiis.
Waa maxay darajada loo baahan yahay?
Sidaa darteed, sida loo sameeyo guriga duufaanka guriga? Ka hor intaadan si toos ah ugu soconin wax soo saarka, waxaad u baahan tahay inaad iibsato nooca saxda ah ee hadhuudhka.
Dufanka, miiraha kala duwan oo kala duwan, oo loo yaqaan "bursting", ayaa loo isticmaalaa. Waxay ka duwan tahay jajabyada caadiga ah ee khafiif ah iyo isla markaa qolof adag, hodan ku ah borotiinka iyo dufanka (kaas oo la diyaarin karaa hadhuudhka ku yaala cob, halkan ka akhriso).
Darbiga adag wuxuu hubiyaa in hadhuudhku uusan si degdeg ah u jajabin, laakiin marka hore si fiican ayuu u kululaa oo si fiican u furaa, oo si weyn u sii kordhaya mugga. Kala duwanaanshahan, illaa 99% oo ah miraha waxaa lagu muujiyey inta lagu jiro karinta!
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah hadhuudhka for popcorn:
Zeya - kala duwan ayaa sidoo kale xiiso leh midabka burgundy.
Caawin! Waxaad iibsan kartaa miro gaar ah oo loogu talagalay dukaanka cuntada, iyo haddii aad qorshaynayso inaad isbeddesho, waxay ku filnaan doontaa inaad ku beerato qaar ka mid ah noocyada kor ku xusan ee hadhuudhka caadiga ah.
Dadka caadiga ah waxay badanaa la yaabaan haddii ay suurtagal tahay in laga sameeyo hilibka doofaarka caadiga ah. Haa, arin ahaan waa suurtagal. Laakiin dhab ahaan, tani maaha mid u qalantaa. Mucooyinka burka ayaa si fudud u gubi kara - tani badanaaba waa kiisaska guriga aan la aqoon, waana fiicantahay haddii aanay cidna gubin.
Xitaa haddii ay tijaabadu ku guulaysato, noocyada hadhuudhka caadiga ah ayaa qarxi doona miro yar, iyo kuwa weli furan, waxay noqon doonaan kuwo aad uga duwanaaya duufaanta caadiga ah ee muuqaalka iyo cabbirka.
Sidaa daraadeed iibsashada qalabka khaaska ah waxay badbaadineysaa wakhti badan, dareemayaal waxayna kaa badbaadinayaan alaabooyinka.
Cunto hilibka doofaarka loogu talagalay macaanku maahan mid ku habboon, laakiin waxaa habboon in la tijaabiyo warshad duurjoog ah. Waxay u ekaan doontaa nuqul yar oo ah warshad caadi ah - oo ah qulqul ka yimaada timirta, ma aha oo keliya huruud, laakiin sidoo kale madow, caddaan ama xitaa midabo badan.
Caadi ahaan, duufaan waxaa lagu kariyaa farsamooyin kulul ama digsi leh subag badan. Meelaha dadwaynaha, rashadani waxaa lagu sameeyaa baabuur leh kuleyliyaha hawada (popper), taas oo yaraynaysa halista suxuunta si loo yareeyo waxoogaa yar. Laakiin ma jirto wax macquul ah in qalabkaas lagu iibsado guriga, waxaa wanaagsan in la isticmaalo digsi ama skillet leh dhinacyo waaweyn. Tani way ka fiican tahay digsiga - way fududahay in saliida lagu shubo.
Faa'iidada habkani waa in dhadhanka si sahlan iyo si dhaqso ah loo kariyo microwave kasta, waxaa loo balan qaadayaa in uusan gubin ama gubin. Laakiin waqti isku mid ah ayaa ka soo baxaya kuleylka ka badan mashiinka dhalada: hadhuudhku waa inuu ku shubaa saliid aad u badan, sababtoo ah ma jiri doonto fursado lagu ruxo ama lagu daro inta lagu jiro habka karinta.
Tiknoolajiyada wax lagu kariyo waa:
Qaado dhowr cobs hadhuudh ah. Xitaa ma aha in la dhaqo: dhammaan isku mid ah, inta lagu jiro habka karinta ee heerkulka sare wax walba waa la nadiifiyey.
Dooro miir ka kobcinta. Si taxadar leh u dooro: waa inay dhammaantood noqdaan kuwo buuxa.
Qaado weelka, ku habboon cuno karinta mikrowave. Ku shub saliida xaddiga 1 qaado oo ah 1 litir.
Talo: saliid gabbaldayaha, haddii loo baahdo, waxaad bedeli kartaa qumbaha. Aad ayay faa'iido u leedahay caafimaadka iyo, sidoo kale, waxay siin doontaa daaweynta dhadhanka aan caadiga ahayn.
Ku rid kernels ee digsiga iyo si fiican isku walaaq ilaa filim saliid ah ayaa lagu sameeyay iyaga. Tirada miraha waxay kuxirantahay mugga saxarada la soo xulay, laakiin waa inay ahaato mid yar! Xooga saar xaqiiqda ah in 25 grams oo miro ah ka dib markii wax lagu karsado ay ku jiri doonto mugga 1 litir.
Ku xir weelka si adag oo dabool leh kuna soo dir microwave. Awooda qiyaasta - 600-700 watts.
Si dhakhso ah, xoqan waxaa laga maqlaa mikrowave - miraha dalaggu waa la shaaciyaa. Diiditaanka mashiinka microwave waa lagama maarmaan ka dib wakhti u dhexeeya xirmooyinka oo si xoog leh u kordha: tani waxay ka dhigan tahay in ku dhowaad dhammaan badarka diyaar u yihiin. Celceliska wakhtiga karinta wuxuu qaadanayaa 3-4 daqiiqo.
Delicacyadu waa diyaar! Waxay ku sii jirtaa oo keliya inay ka soo baxdo microwave, ku dar saliid iyo sonkor ama cusbo - dhadhan.
Xitaa way fududahay inaad kariso duufaan, oo lagu iibiyo bacaha gaarka ah ee loogu talagalay microwave. Si arrintan loo sameeyo, si toos ah u xir xirmada mikrowave oo guji "Start".
Daawo fiidiyowga ku saabsan sida loo sameeyo dufanka mashiinka microwave:
Qaado skillet leh qabad hoose iyo dhinacyada sare, birta ugu fiican.
Ku shub saliideeda - qiyaastii 3 qaado oo malab ah 1.5 litir.
Ku shub weelka qoyan ee ku jira saliidda diiran oo markiiba dabool ku dabool. Intaas ka hor, waxaad ku hayn kartaa miraha dhowr saacadood oo barafeeyaha: tani waxay hubinaysaa in heerkul aad u fiiqan iyo qarax degdeg ah oo qumman oo miro ah.
Way ka fiican tahay inaad dabka ka qaaddid dabka intaad hurudid. Ka dib marka ay lagama maarmaan tahay in la jeexo dhowr jeer dhinaca dhinac, saliiddu waxay si dhab ah u dhici doontaa dhammaan miraha.
Waad furi kartaa surwaalka kadib markii qarxyadu ay soo buuxsamaan. Haddii kale, waxaad halis ugu jirtaa inaad qarxisid duulimaad maqaasiinka ah ee qolka. Ka sokow, waxay kugu gubi kartaa.
Ku duuji kareemka kulul ee saxan, milix ama sonkor. Waxaad samayn kartaa, ilaa daaweynta aan la qaboojinin, kula saydhaa oo subagga la daadi.
Talo: Isku dar mashiinka dhirjirta leh iyo subagga bac balastiig ah oo xiran, isaga oo ruxaya xoogaa dhowr jeer.
Waxyaabaha loo yaqaan 'Aromatic Additives'
Qodob kasta oo lagu sameeyo samaynta laftirka laftiisa ayaa horay loogu talagalay si loo hagaajiyo dhadhanka raaxada leh saliid iyo cusbo ama sonkor. Laakiin waxaa jira dhadhan badan oo ka mid ah saxankaas. Waxaad tijaabin kartaa, ku darsan kartaa noocyo kala duwan oo dhir udgoon:
paprika iyo xitaa khudradda isku dhafan ee bacda.
Carruurtu waa inay ku raaxaystaan ​​duufaan karamel ah, oo sidoo kale laga samayn karo guriga:
Inkasta oo miro la furo, ay dhalaalaan subagga oo ay milaan sonkorta granulated.
Weelka ku sii daa weelka macaan ee dabka iyo, adoo walaaqaya si joogto ah, u keen midab dahabi ah.
Ka dib markaa, ku daadi caanaha oo ku darso duufaanka oo isku dar.
Fiiri fiidiyowga leh qaacidada dufanka caramel:
Waxa kale oo aad hagaajin kartaa iskudhafka adiga oo diyaarinaya caramel shukulaatada - si aad tan u sameyso, u dhalaaliso foornada macaan ama ku dar budada kookaha subagga iyo sonkorta.
Qodob kale oo weyn. Iyo ma leh additive aromatic, laakiin leh jiis dhab ah, si yaryar u daadi ku delicacy kulul. Cheese wey dhalaali doontaa oo abuuri doontaa xarriiqo afka ah oo aan bedeli doonin dhadhanka xitaa ka dib marka la isku daro.
Waa wax aad u adag marka loo eego kuwa hore, laakiin hubaal maaha inaad ka tagto adiga ama martidaada aanad waxba tarayn!
Qaado sharoobada hadhuudhka (50 ml), nus koob oo sonkor ah, sonkorta yar yar oo cabbir ah, qanjaruufo oo ah bambo, milix iyo basbaas, iyo sidoo kale 2 litir. biyaha.
Waxyaabaha loo baahan yahay in la isku daro oo la karkariyo kuleylka hooseeyo illaa qayb ahaan ka yaraato (ilaa 20 daqiiqo).
Ka dib marka isku dar ah isku darka si aad ugu shubtid duufaanka.
Corn waa badeecad wax tar leh oo loo isticmaali karo diyaarinta suxuuno kala duwan. Akhri talada khabiirkeena ku saabsan sida loo ilaaliyo, marinate, shiili badelka buugta caafimaadka leh ee digsiga qaboojinta, sida loo kala saaro cuntada leh khudradda qasacadaysan, iyo sidoo kale sida loo kariyo boorashka hadhuudhka delicious iyo samayso salad, oo ay ku jiraan ulaha cagaaran.
Sidee loo kariyaa khudradda la kariyey?
Haddii aad hore u karisay hadhuudhkii, laakiin si lama filaan ah u rabay duufaan, markaas waxa ugu fiicani waa in la iibsado dhegta cusub. Miiraha la kariyey ee daankuna kaliya ma shaqeyn doono: looma sharixi doono, sababtoo ah qolofka cufan ee geedi socodka karinta ayaa durbadiiba noqotey mid jilicsan, oo nuurkana leh dhibic biyo ah ayaa la bedelay.
Habka, habka soo noqnoqonaya sidoo kale waa wax aan macquul ahayn: hadhuudh, oo si gaar ah loogu kobciyo duufaan, ma kari doonaa diyaargarowga buuxa. Waxaa jira noocyo fara badan oo ku haboon sameynta dufanka, iyo sidoo kale cuntooyinka.
Sidaa u tijaabi oo ku raaxeyso dhadhanka dawooyinka guriga lagu nadiifiyo!